စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေး အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးမယ်လို့ ချမ်းချမ်းပြော — မြန်မာဌာန
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်မရောက်မချင်း စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကို ရရာနေရာကနေ အစွမ်းကုန် ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရတဲ့ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အသက်ပေးသွားရသူအားလုံးကိုလည်း အထူးလေးစား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကျဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အားတင်းထားကြဖို့ သူက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အီတလီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ အဆိုတော်ချမ်းချမ်းကို RFA အဖွဲ့သူ မခင်ခင်အိက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တွေက ဝန်ထမ်းတသောင်းကျော် တာဝန်ကနေ ယာယီရပ်ဆိုင်း
Maung Aung Kyaw Kyaw says:
Generals always say that We are for People that so why the people not accept them. Plz think about it, Generals. take part into CDM Movements and Think about Your Children Future and Future of Country. We also always welcome to you to include CDM movements.